Blind Dates: Ny Feon’ny Radio Antserasera ao Thessaloniki · Global Voices teny Malagasy
Blind Dates: Ny Feon'ny Radio Antserasera ao Thessaloniki
Voadika ny 14 Oktobra 2019 3:57 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Desambra 2011)
Amin'ny alàlan'ny fandefasana ny onjam-peo antserasera, fisantarana andraikitra nataon'ny tetikasa nahazo vatsy tamin'ny Rising Voices, Blind Dates, dia afaka manomboka mandre ny fientanentanana amin'ireo feo ao ambadiky ny tetikasa ianao. Antsoina hoe Blind Dates Radio ny fantsona, ary azo jerena ao amin'ny sehatra My Radio Stream, manome hirika tsy manam-paharoa ho an'ny taranaka vaovao mpamokatra radio, izay mpikambana ao amin'ny vondron'olona jamba any Thessaloniki.
Fangon'ny Blind Dates Radio namboarin'i Petros Fragopoulos.
Ankoatra ny hoe afaka mifandray amin'ny mpihaino amin'ny alàlan'ny fisafidianany ny mozika ankafiziny, dia mandray fanehoan-kevitra avy hatrany avy amin'ireo mpihaino amin'ny alàlan'ny hihy karajia ao anatin'ny tranonkala izy ireo. Mampiasa ny mpamaky-efijery, afaka mahazo ireo fangatahana ny mpamokatra ao amin'ny radio ary manaiky ireo hafatra maro fiarahabana. Misy ny fikasana hanampy fandaharana vaovao amin'ny endrika fandraketam-peo momba ireo olana atrehan'ny vondron'olona jamba any avaratr'i Gresy. Ohatra, vao haingana ny vondrom-piarahamonina no nanasa ny Filohan'ny Fikambanana Pan-Hellenic ho an'ny Jamba mba hiresaka momba ny fiantraikan'ny fepetra fitsitsiana ao Gresy amin'ny vondron'olona jamba.
Eto raha hihaino ny Radio Blind Dates.
Miely tsimoramora ny teny, ary nandritra ny fandefasana voalohany, dia nahatratra 18 ny isan'ireo mpihaino. Mandeha antserasera mandritra ny fito andro isaky ny herinandro [el] ny radio, miaraka amin'ny ankamaroan'ny fandaharana mivantana, saingy misy ihany koa ireo programa voarakitra mba hanampy amin'ny famenoana ny andro.
Ireo mpikambana ao amin'ny ekipa Radio Blind Dates
Manoratra ny antony nisafidianan'ny tanora handray anjara amin'ny fananganana radio antserasera i Alexia Kalaitzi, mpandrindra ny tetikasa. Ny antony iray dia ny fahafahana mitantana ny onjam-peo manontolo, manome fampaherezana lehibe ho an'ny mpikambana ao amin'ny vondron'olona jamba. Mampiasa ny teknolojia misy, afaka mampiasa ny pejy fandraisana miaraka amin'ny fanampiana kely ireo mpamokatra amin'ny radio. Raha ny marina, dia nanjary be mpitia ao anatin'ny vondron'olona ny onjam-peo ary maro hafa sahady no efa nanao sonia te hiditra amin'ny fahafinaretana.
11 ora izaySoeda
1 andro izayGV Mpisolovava